अमेरिका, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको, रसियालगायत थुपै्र देशमा कोरोना महामारीले असर पारिरहेको छ । १ अर्ब ३८ करोड २० लाख जनसंख्या रहेको भारतमा दैनिक ७० हजारको हाराहारीमा संक्रमित देखिनु र झन्डै १ हजारको हाराहारीमा मानिसको मृत्यु हुनुले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटानका जनतालाई आतंकित बनाएको छ । बाक्लो जनघनत्व भएको भारतमा मात्र ३ करोड मानिसमा कोरोना जाँच गर्दा नै ३१ लाख संक्रमित देखिए । भारतबाट कति कोरोना संक्रमित नेपाल भित्रिए सरकारसँग यसको डाटा छैन । त्यसैले आगामी दिनमा नेपाललाई कोरोनाले कसरी गाँज्ने हो यसै भन्न सकिँदैन ।
अमेरिका, इटली, बेलायत, स्पेनलगायत देशमा कोरोनाले महाआतंक मच्चाइरहेका बेलामा मन्त्रीहरूले नै नेपाललाई यो रोगले नछुने, नेपाल कोरोनामुक्त, नेपाल ग्रीन जोनमा भनेर आत्मरतिमा बसे । झन्डै ४ महीनाको बन्दाबन्दीको अवधिमा सांसद अपहरण, सरकार ढाल्ने र बचाउने, औषधि खरीदमा अनियमितताजस्ता काण्डमा सरकार रमाइ रह्यो । जनतालाई ४ महीनासम्म घरमै नजरबन्द गरेर कारोनाको रोकथाममा रू. १० अर्ब खर्च भयो । तर, त्यो खर्च केमा भयो थाहा छैन । किनकि भ्यालिन्टलेटर किनिएको छैन, आइसोलेशन वार्डहरू थपिएका छैनन् । ४ महीना बन्दाबन्दी लगाइए पनि यस अवधिमा कोरोनाविरुद्ध केही पनि तयारी गरिएको देखिएन । कोरोनाले हाल नेपालमा १९० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ५÷६ महीनाको अविधिमा सरकारले जनताको पक्षमा केही गरेको देखिएन । बरु कोरोना संक्रमितहरूले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ । कोरोना लागेकाहरूलाई सामाजिक बहिष्कार, अछुतको व्यवहार गर्ने, हतोत्साही गर्ने, जस्ता कार्य हुँदा त्यस्तामाथि कुनै कारबाही भएको छैन । रोग हो, जसलाई पनि लाग्न सक्छ । रोग लाग्नेबित्तिकै मर्ने होइन नि । रोग लागेको मानिसलाई केही हुँदैन भनेर उच्च मनोबल राख्न हौसला दिने हो कि छिःछिः र दुर्दुर गर्ने हो ? अमेरिकामा दैनिक ६० हजार संक्रमित हुन्छन् तैपनि श्रीमतीको रिपोर्ट श्रीमान्ले र श्रीमान्को रिपोर्ट श्रीमतीलाई भनिँदैन । खै कसैलाई छिःछिः र दुर्दुर गरिएको पाइँदैन । नेपालमा त परिवारका सदस्यलाई भन्दा पहिला कोरोनाको रिपोर्ट छिमेकीलाई पुग्छ । मानाैं, ती छिमेकी अर्कै धर्तीबाट आएका हुन् उनीहरू अजम्बरी हुन् । हुँदाहुँदा अब त डाक्टर र नर्सहरूलाई पनि टोल निषेध गर्न थाले । त्यस्ता अजम्बरी डरपोकहरू अस्पताल नभएका, भीडभाड नभएको दुर्गम भेगमा गएर बसे भैगो’नि, अरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुभन्दा ।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० को नारा दिएर अर्बौं खर्च गरिसकेको सरकारले २० लाख पर्यटक ल्याउने कुरै भएन । विदेशमा काम गरेर पठाएको रकमले सरकारको वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनमा आएको हो । तर, विवशताले रोजगारीका निम्ति बाहिरिएका नेपालीलाई सरकारले वास्ता गरेन । रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन लागेका र बिचल्लीमा परेका नेपालीको उद्धारका नाममा सरकारले उनीहरूलाई ठगेको छ । निययमित उडानबाट सस्तो हवाई भाडा तिरेर नेपाल आउन सक्थे तर नियमित उडान बन्द गरी चार्टर उडानबाट चौबर महँगोमा आउन उनीहरू बाध्य छन् । त्यस्तै दैनिक ४ देखि ९ हजार खर्च गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । उनीहरूको रकमबाट अर्बौं रुपैयाँको कोष बनेको छ । तर, त्यसबाट उनीहरूलाई आपत् परेका बेला १ रुपैयाँ पनि खर्च गरिएको छैन । यो उनीहरूमाथि अन्याय हो । पछिल्लो समय चौतर्फी विरोध भएपछि कोरोना नलागेको पुष्टि भएमा त्यो खर्च गर्नु नपर्ने भनेर सच्च्याउने प्रयास गरिँदै छ । तर, त्यत्रो हवाई जहाजमा कसैलाई पछि कोरोना लागेको पुष्टि भएमा के गर्ने सरकार मौन छ । यो ५ महीनामा सरकारले के उपलब्धि गर्‍यो ?
जसरी सुनिश्चित भविष्यका लागि शहर पस्न बाध्य भएकाहरूलाई आप्mनै जन्मगाउँ प्यारो लाग्छ । नलाग्दो हो त देश भूकम्पबाट ध्वस्त हुँदा विदेशिएकाहरूले नै आप्mनो गाँस काटेर देशलाई सहयोग गरे । भारतले नाकाबन्दी गरेका बेलामा विदेशिएकाहरूले नै ‘गो ब्याक इन्डिया’ भनेर अन्तरराष्ट्रियकरण गरे, जसका कारण इन्डिया पछि हटेको जगजाहेर छ । त्यसबेला नेपालमा बसेर नेपालको नागरिकता बोक्नेहरूले के गरे त दाउरामा भात पकाएर खानेबाहेक ?
देशको राजनीतिक दुर्गन्ध र बच्चाको डाइपर बेलैमा बदल्नु जान्नुपर्छ । यदि बच्चाको डाइपर बेलैमा बदल्न जानिएन भने बच्चा दुर्गन्धित हुन्छ, उसलाई घाउ खटिराले धेरै दुःख दिन्छ । हो, त्यस्तै गरी देशको राजनीतिक दुर्गन्धलाई पनि बच्चाको डाइपर जस्तै बेलैमा बदल्न जान्नुपर्छ । यदि बेलैमा बदल्न जानिएन भने टोल, समाज, गाउँ, क्षेत्र हुँदै सिंगो राष्ट्र नै दुर्गन्धित हुनेछ । त्यसैले देशबाट सर्वप्रथम दुर्गन्धित राजनीतिलाई सुधार गरौं । त्यसपछि आधा समस्या आफै समाधान हुन्छ । कोरोना पीडितलाई छिःछिः र दुर्दुर त्यही राजनीतिक दुर्गन्धको उदाहरण हो । देश हाँक्नेमा नै नैतिकता नभएपछि जनतालाई कसले नैतिकता सिकाउने ?